Warsaxaafadeed Weerarkii lagu qaaday wargeyska Hubaal wuxuu ahaa mid lagu cabudhinayo saxaafadda madaxabanaan Xarunta Xuquuqal Insaanka | Salaan Media
Warsaxaafadeed Weerarkii lagu qaaday wargeyska Hubaal wuxuu ahaa mid lagu cabudhinayo saxaafadda madaxabanaan Xarunta Xuquuqal Insaanka
Published: 03/05/2013 @12:45
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxay si adag u canbaaraynaysaa weerarkii 24 April 2013 lagu qaaday wargayska Hubaal ee ka soo baxa magaaladda Hargeisa. Waxa walaac aad u wayn leh in qofkii loo qabtay falkas uu ka tirsan yahay Booliiska. Hadal waxyeelo ku ah baadhidda weerarkaas ayaa ka soo baxay masuuliyiinta dawladda qaarkood.
Taliyaha Booliisku wuxuu isaga oo ka hadlaya Golaha Wakiilada hortooda uu sheegay in falkaasi u gaar yahay ninka u xidhan, dhinaca kale wuxuu sheegay in baadhitaankii socdo. Su’aashu waxay tahay waxa la baadhayaa muxuu yahay hadii natiijadii laga sii hordhacay oo ay tahay wax la sii go’aamiyay.?
Waxaan lagu kalsoonaan karin baadhitaanka ay wadaan Booliisku. Weerarkani wuxuu ahaa mid lagu cabudhinayo saxaafadda madaxabanaan oo muhiimad wayn u leh dalka. In Booliiska oo la tuhun san yahay uu baadho dacwadaasi waa mid ka soo horjeedda cadaaladda dabiiciga ah, mana aha mid haboon in cidii falka lagu tuhunsanaa ay iyadu noqoto baadhe.
Xarunta Xuquuqal Insaanku waxa soo jeedinay:
1. In loo diro baadhid ka madaxbanaan Booliiska weerarkaas lagu qaaday wargeyska Hubaal si cidii ka masuulka ahayd falkaas cadaaladda loo horkeeno
2. In ay masuuliyiinta dawladu qaadaan waajibka ka saarain in dhibanayaasha weerarkaasi helaan cadaalad